မသောက်ရလျှင် မနေနိုင်သူများအတွက်/သောက်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မသောက်ရလျှင် မနေနိုင်သူများအတွက်/သောက်နည်း
Posted by alinsett on Oct 27, 2016 in Creative Writing, Ideas & Plans, My Dear Diary, News | 8 comments
Thint Aye Yeik's Creation မသောက်လျှင် မနေနိုင်တာက လွဲလို့. . .
မရှက်တမ်း ဝန်ခံကြေးဆိုရင်. . .
မနက် မိုးလင်းတာနဲ့ မသောက်ရရင် မနေနိုင်ဘူး ဖြစ်လာတာ။
(အခု ခေတ်စားနေတဲ့စကားနဲ့ ပြောရရင် အသားတွေတောင် တဆတ်ဆတ်တုန်တယ်တို့ ဘာတို့ပေါ့- *ဤကား စကားချပ်)
သောက်လိုက်တော့မှ ရွှင်မြူးတက်ကြွလာတာ။ အဟုတ်ပါဆို။
မနက် မနက် ရုံးကို ပြေးရချိန်ဆို အိမ်ကနေ ကားထုတ်ပြီး ပါရမီလမ်းပေါ် ရောက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲ လမ်းတွေက ပိတ်။ တိုးဟယ် ကျော်ဟယ် ခွဟယ်နဲ့ သွားကြိုရမယ့် ကိုယ့်ရုံးကအရာရှိအိမ် (တာမွေဘက်ကို) ရောက်ချိန်နဲ့ -ကိုယ့်အိမ်က ထွက်ချိန်ကြားမှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ထဲ ဝင်ပြီး ထိုင်သောက်ဖို့ အချိန်မရဘူး။
အဲ့တော့ ဆိုင်ကနေ ဝယ်လာ။ ကားပေါ်ရောက်တော့မှ မီးပွိုင့်မိတုန်း—- (ကားပေါ်မှာ ခွက်မပါတော့) ဆိုင်ကနေ ဝယ်လာတာလေးကို ဖောက်ပြီး ရေသန့်ဗူး အလွတ်တစ်ခုထဲ ထည့်။
အိမ်က ထည့်လာတဲ့ ရေသန့် ရေခဲရေနဲ့စပ်။
ပြီးတော့ ရေခဲရေနဲ့စပ်ထားတဲ့ဗူးကို အဖုံးပိတ်။ ဂလောက်ဂလက်နဲ့ ဗြောင်းဆန်အောင် ခလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့. . .
ရေခဲရေအေးလေးနဲ့ မျှမျှတတရောစပ် ပျော်ဝင်သွားပြီး အသင့်သောက်သုံးလို့ ရသွားရော။
အဲ့ကျတော့မှ ကားမောင်းနေရင်းနဲ့ မီးပွိုင့်မိချိန်တို့ဘာတို့မှာ ရေခဲရေနဲ့စပ်ထားတဲ့ ဗူးလေး ဖွင့်ပြီး ဂလု။
ဆယ်မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာလောက် ဂလုလို့ ပြီးသွားရော။ ကားပေါ်မှာတင် အချိန်မကုန် အမြည်းတွေဘာတွေ မကုန်ဘဲ ဂလုလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပေါ့။
အောင်မာ အဲ့ဒါလေး ဂလုပြီးတော့မှ လူက နေသာထိုင်သာရှိပြီး ရွှင်မြူး တက်ကြွလာတာ။
ရုံးက အထက်အရာရှိအိမ်ရှေ့. . .
ဝူးခနဲ ကားကို ထိုးရပ်. . .
သူ ကားပေါ်တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်က အစွမ်းကုန်တက်ကြွလန်းဆန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့. . .
”ဟဲလို. . .မင်္ဂလာပါ. . .အာယူအိုခေ?”
”အိုင်အမ်ဂွတ်။ သိုင်းခရူး။ အန်န်ယူ?” ဘာညာ သာလကာ ဘွတ်ဒတ်ရွှတ်ဒတ်… (တဦးနဲ့တဦး မတွေ့တာကြာပြီး လွမ်းနေတဲ့သားအမိတွေ အခုမှပြန်ဆုံသလိုမျိုး ပြေးဖက်လုနီးပါး) အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်။
(အမှန်က နေ့တိုင်း တချိန်လုံး ရုံးမှာ တွေ့နေရတာ)
အင်္ဂလိပ်သီချင်းကို တိုးတိုးဖွင့်ပြီး တစ်နေ့တာကို စလုံးရေး စရော။
ဟော . . .
နေ့လည်လောက်ကျတော့ မနက်က အရှိန်က ပြေချင်ချင်ဖြစ်ပြီ။
ဒီတော့ နောက်ထပ်. . .
ဆိုင်ထိုင်ဖို့မှ အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်. . .
အဲ့လိုပဲ ကားထဲမှာ ရောလိုက် စပ်လိုက် ဂလုလိုက်ပေါ့။
(ကားပေါ်မှာသောက်ဖို့ ရောဖို့စပ်ဖို့တော့ ဆိုင်ကနေ ကြိုဝယ်လာခဲ့ရတာပေါ့။)
ကားမောင်းနေရင်းနဲ့ ဘေးမှာ ရေအေးအေးလေးနဲ့ ရောစပ်ထားတဲ့ ဂလုစရာလေး ချပြီး ဂလုရတဲ့ အရသာကလေ. . . ဘာပြောကောင်းမလဲ။
တချို့ ဆိုင် ထိုင်ဖို့အချိန် မပေးနိုင်တဲ့ ကားမောင်းနေရသူများလည်း အဲ့ဒီနည်းကို လိုက် လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်က ကြိုက်တတ်လို့ သောက်ချင်ပြီဆိုမှတော့ ဆိုင်ထိုင်ဖို့ အချိန် မပေးနိုင်တာနဲ့ မသောက်လိုက်ရ မရှိလေအောင် ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ သောက်ကြစေချင်ပါတယ်။
ကျနော် အခု ပြောတဲ့ ကားပေါ်မှာ ရေသန့်ဗူးထဲထည့် ရေနဲ့စပ်ပြီးသောက်တဲ့နည်းဆိုရင် အားသာချက်တွေတောင် ရှိပါသေးတယ်။
၁။ ဆိုင် မထိုင်ဘဲ ကားပေါ်မှာတင် သောက်လို့ရတဲ့အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း၊
၂။ဆိုင်မှာထိုင်မိရင် တခြား စားသောက်ဖွယ်ရာတွေပါ စားမိတတ်တာကြောင့် ငွေပိုကုန်မယ့်အလားအလာ မရှိခြင်း၊
၃။ဆိုင်မှာဆိုရင် အဲ့ဒီလို တစ်ခါသောက်ကိုပဲ ၂၀၀(သို့မဟုတ်)၃၀၀ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး။ ကျနော်ပြောသလို ကိုယ့်ဘာသာ (ခွက်မရှိလည်း ရေနဲ့ရေသန့်ဘူးထဲ ထည့်ဖျော်) သောက်ရင် ဆိုင်က ဝယ်လာတဲ့အတွက် ကော်ဖီမစ်တစ်ထုပ်မှ တစ်ရာကျပ်သာ ကျသင့်ခြင်း။
ကဲ မကောင်းဘူးလား အဲ့နည်းလေး။
ဒီတော့ ကော်ဖီမစ်ကို ဆိုင်မှာ ထိုင်သောက်ဖို့အချိန် မပေးနိုင်သူများ. . .
အဲ့လို ရေသန့်ဗူးထဲ ကော်ဖီမစ်ဖောက်ထည့်ပြီး . . . .
ရေအေးနဲ့ပဲ ကော်ဖီအေး ဖျော်သောက်တဲ့နည်းကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါကြောင်း . . .
ပုံ/ ကော်ဖီ မသောက်ရလျှင် မနေနိုင်သူ- မောင်သူရ
ငိုက်မှာကြောက်တော့ ကော်ဖီ ကို အားတိုင်းသောက်။
.ကော်ဖီသံသရာ စက်ဝိုင်းကြီး လည်နေတာပေါ့။
.ကော်ဖီထက် အရသာ ပိုရှိမယ့် တခြား စွဲစရာတစ်ခုခုတော့ ရှာအုန်းမှပါလေ
သိချင်လာလို့ အခုမှ google မှာ ရှာကြည့်လိုက်တာလေးထဲက တစ်ပုဒ်
အဲ့ကနေ မ လာတယ်။
Coffee mix ကော်ဖီမစ် နဲ့ ကျန်းမာရေး
Coffee Mix သောက်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်တွေ သိချင်ပါတယ် ဆရာ။
Coffee Mix ‘ကော်ဖီမစ်’ ကို သုတေသနလုပ်ထားတာ မတွေ့သလောက်ဖြစ်တယ်။ တွေ့ရင်ရေးပါမယ်။ ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ ‘ကေဖင်း’ အကြောင်းရေးထားတယ်။ အထားခံအောင်လုပ်တဲ့ဓါတ်၊ အနံ့-အရသာအတွက် ထည့်တာနဲ့ ထုပ်ပိုးစရာတွေကိုလဲ သတိထားရပါမယ်။ ‘ကယ်လိုရီ’ ကိုလဲ တွက်ချက်ရပါမယ်။ အဆီပါဝင်မှုကိုလဲ တွက်ရပါမယ်။
Instant coffee mix ‘အင်းစတင့် ကော်ဖီမစ်’ နဲ့ Powdered creamer ‘ခရမ်မာ နို့မှုံ့’ နှစ်မျိုးလုံးထဲမှာ High fat levels အဆီပါဝင်မှု များတယ်။ Fatty pork အဆီများတဲ့ဝက်သားနဲ့ ဆတူရှိတယ်လို့ ၂၄-၅-၂ဝ၁၃ နေ့ထုတ် တောက်ကိုရီးယား ဆေးသုတေသနသတင်းမှာပါတယ်။
သုတေသနအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပါမောက္ခ Hwang Geum-taek ‘ဟွန် ဂွမ်-တိ’ ကနေပြောတာက အဲဒီ နှစ်မျိုးလုံးထဲမှာ လူတွေကျန်းမာရေးနဲ့မသင့်တဲ့ Saturated fat ပြည့်ဝဆီတွေ ပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သွေးထဲမှာ Cholesterol ‘ကိုလက်စထော’ ကို တက်စေပါမယ်။
လေ့လာမှုလုပ်သူတွေကနေ ‘အင်းစတင့် ကော်ဖီမစ်’ ၁၁ မျိုးနဲ့ ‘ခရမ်မာ နို့မှုံ့’ ၁၄ မျိုးကို စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။
‘ခရမ်မာ နို့မှုံ့’ တွေထဲမှာ ၁၅့၎% ကနေ ၂၈့၅% ပါတယ်။ ၂၅% ဆိုတာ ဝက်သားအဆီနဲ့ဆတူတယ်။ ‘ကော်ဖီမစ်’ တွေထဲမှာ တမျိုးကလွဲရင် ၁ဝ% ပါတယ်။
‘ခရမ်မာ နို့မှုံ့’ ၁၂ မျိုးထဲမှာ ပြည့်ဝဆီ ၉ဝ% ပါတယ်။ ‘ကော်ဖီမစ်’ အားလုံးထဲမှာ ပြည့်ဝဆီ ၉၉% ပါတယ်။ ကြက်သားထဲမှာ ၂၉% နဲ့ အမဲသားထဲမှာ ၄ဝ% ပါတာနဲ့ယှဉ်ကြည့်သင့်တယ်။
‘ကိုလက်စထော’ များသူတွေဟာ နှလုံး-သွေးကြောရောဂါဖြစ်ဘို့ သတိထားကြပါတယ်။
၁၉-၂-၂ဝ၁၄ နေ့ကလာတဲ့ ဘီဘီစီကျန်းမာရေးသတင်းမှာ အစားအသောက်တွေကို ထုပ်ပိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်အကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိထားတာ နည်းနည်းလေးသာ ရှိသေးတယ်လို့ ပါရှိခဲ့တယ်။ ကနေ့အထိ အစားအသောက်တွေကို ထုပ်ပိုးဘို့ ဓါတုပစ္စည်းအမယ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ လောက် သုံးနေကြပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ လူကိုဝစေတာ၊ ဆီးချိုဖြစ်တာ၊ အာရုံကြောထိခိုက်တာတွေကို လေ့လာဘို့ အများကြီး လိုနေပါသေးတယ်။ Formaldehyde ‘ဖေါ်မယ်လဒီဟိုက်’ ပါနေရင် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရေအပါအဝင် သောက်စရာတွေထည့်တဲ့ ပလပ်စတစ်ထဲမှာ ပါတတ်တယ်။
Tint Swe at 9:07 AM
အချို၊ မယ်လမင်း၊ တရုတ်နို့မှုန့်၊ ကော်ဖီမစ် နဲ့ ရောဂါစုံ
ကျန်းမာရေး, စားသောက်ဖွယ်, ဗဟုသုတ
အချိုရည်ဘူးများတွင် တားမြစ်ဆိုးဆေး၊ ကင်ဆာဖြစ်စေသော တာရှည်ခံဆေး၊ သကြားထက် အဆ ၂၀၀ ပိုမို ချိုစေသော ပါဝါသကြားနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖိန်း ဓာတ်များ ပါဝင်သဖြင့် ခံတွင်းကင်ဆာ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် အ၀လွန်ရောဂါ၊ အသည်းကင်ဆာရောဂါတို့ကို ဖြစ်ပွားစေသည်။
ထို့အတူ ဂျယ်ရီဘူးများတွင်လည်း တရုတ်မှ လာသော ဂျယ်ရီပေါင်ဒါ၊ ဆီထရစ်အက်ဆစ်၊ Sodium Benzorate ခေါ် တာရှည်ခံဆေးပါဝင်သဖြင့် ကလေးများကို လုံးဝ မကျွေးသင့်၊ မရောင်းသင့်ပါ။
*မယ်လမင်း (ဖိုက်ဘာ) ပစ္စည်းများ
ထိုပစ္စည်းများသည် အပူနှင့် ထိတွေ့လျှင် ဓာတ်ပြုသဖြင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် ကင်ဆာရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေသဖြင့် လုံးဝ အသုံးမပြုသင့်ပါ။
*တရုတ်နို့မှုန့်နှင့် ၄င်းနှင့် ပြုလုပ်သော မုန့်များ
တရုတ်နို့မှုန့်ကို ဖျော်ကာ ခွေးပေါက်စ၊ ကြောင်ပေါက်စလေးများကို တိုက်ကျွေးရာ ထိုခွေးကလေး ကြောင်ကလေးများသည် အကြော ဆွဲကာ ၁၈ ကောင်ထက်မနည်း သေဆုံးကုန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်ပြည်မှ တံဆိပ်မျိုးစုံနှင့် တင်သွင်းသော နို့မှုန့်များနှင့် ၄င်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော မုန့်ပဲ သရေစာများကို ကလေးများကို လုံးဝ မတိုက်ကျွေးသင့်ပါ။
*ကော်ဖီမစ်များ ( Coffeemix)
ကဖိန်း၊ တာရှည်ခံ ဓာတုဆေး၊ ကော်ဖီအနံ့ ၊ အုန်းသီးခွံအမှုန့်များနှင့် သကြား၊ အခြားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသဖြင့် မသောက်သုံးသင့်ပါ။
၄င်းရယ်ဒီမိတ် ကော်ဖီများကို သောက်သုံးပါက ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ နှလုံးသွေးတိုးရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့် ရင်သားကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယ ကင်ဆာနှင့် အမျိုးသမီးများ မြုံခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသဖြင့် လုံးဝ မသောက်သုံးသင့်ပါ။
ထို့ပြင် ကော်ဖီမစ်တွင် နို့ဆီနှင့် နို့မှုန့်အစား အသုံးပြုသော creamer မှာ မလေးရှားတွင် စားအုန်းဆီကို အဆီထုတ်ပြီး ကျန်သော ကြိတ်ဖတ်များကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူကာ မှုန့်နေအောင် ကြိတ်ချေပြီး Creamer အဖြစ် ပြန်လည်ရောင်းချကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို ကြိတ်ဖတ်မှုန့်များသည် သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တခုကနေ ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျ လဘက်ရေ ကော်ဖီလူကိုစွဲစေတယ်တဲ့
ကျနော်လည်း စွဲသလိုလို ဖြစ်နေလို့လေ။ မသောက်ရရင်မနေနိုင်သလို ဖြစ်လာတာ။
မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ သောက်ဖို့ ကြံတာသာကြည့်တော့
အပူမရ ရတဲ့ ရေအေးနဲ့ ဖျော်သောက်မိနေရော
ကျနော်က တစ်ရက်ကို သုံးလေးခွက်။ မမှန်။
တခါတရံ ညအိပ်ခါနီး သောက်ချင်လာရင် သောက်မိပြန်ရော
အဲ သောက်ပေမဲ့ အိပ်ချင်စိတ်ကတော့ ပျောက်မသွား။
တခါတခါ သောက်နေရင်းနဲ့တောင် အိပ်ချင်လာသေး။